India: Ny Tranga Hafahafan’ny Fandrakofana Lamba Ireo Sarivongana Mba Hiantohana Fifidianana Mangarahara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Janoary 2012 12:09 GMT
[Rohy amin'ny teny Anglisy raha tsy asiana fanamarihana manokana ] Hifidy ny fari-piadidiam-panjakana Indiana ao Uttar Pradesh (UP) amin'ny Febroary 2012, mba hifidy ny Antenimieram-pirenena vaovao. Tonga amin'ny faratampon'ny hafanàny ankehitriny ny fanentanan'ireo antoko politika samihafa. Kanefa, ny tena nahasarika ny sain'ny firenena iray manontolo dia ny fanapahan-kevitry ny Kaomisionam-pifidinana hoe saronana lamba daholo ireo sarivongana ao UP maneho an'i Ms. Mayawati (Praiminisitra amin'izao fotoana sy mpitarika ny Antoko Bahujan Samaj) sy ny mari-pamantarana ny antokony – ny elefanta – tamin'ny Alarobia 11 Janoary 2012.
Ny Filohan'ny Kaomisionam-pifidianana, SY Qureishi, dia niteny fa ilay fanapahan-kevitra dia noraisina niainga avy amin'ny Lasi-pitondrantena (Avy amin'ny mpandika : lalàm-pifidianana), mba hiantohana ny hisian'ny fitoviana sy hisorohana ny fahazoan'ny antoko politika sasany tombon-dahiny noho ny fahafahany manàloka ireo mpifidy.
Nandritra ny naha-praiminisitra azy, matetika no sendra resabe momba ny fahazaran-dratsiny manao fandanianiam-poana ny volam-bahoaka i Mayawati amin'ny fananganany sarivongana maneho ny sariny, ary ny sasany dia i Dalit, hatramin'ny elefanta mari-pamantarana ny antokony, manerana ny firenena – indrindra fa ao anatiny sy manodidina an'i Lucknow – renivohitry ny fari-panjakàna, ka hatrany Greater Noida.
Somary goavana araka izany ny asa natomboky ny Kaomisionam-pifidianana. Ilay fanapahan-kevitra sy ireo ezaka naterany (lahatsary nakarin'i timesnowonline ao amin'ny YouTube) dia niteraka fanehoan-kevitra marobe, tsy hoe fotsiny avy amin'ireo antoko politika fa koa hatramin'ireo avy amin'ny mpiondana aterineto :
@SwatySMalik: Na tsy tia an'i #Mayawati aza aho. Heveriko fa lasa lavitra loatra ilay fanapahan-kevitry ny EC handrakotra ny sarivongany sns! #unfair (tsy milamina)
@calamur: isak'izay mba mihevitra ianao fa tsy hisary gaigy ny rafitra, dia porofoin-dry zareo aminao fa diso ianao asaina mirako-boaly ny vehivavy, ny elefanta, ny heloka bevava…
@AbhinandanSekhr: ity fandrakofana ny sarivongan'i #mayawati ity dia hiasa ho amin'ny tombontsoany, azo antoka ny amin'izay. Na dia ireo izay tsy taitra tamin'izany aza dia hahamarika fa “voatampina ny vavany”
@AnupamPkher: Ny sarivongana iray an'i Mayawati voarako-damba dia hanintona kokoa ny maso, noho ny iray izay tsy norakofana. Hiteny ny vahoaka hoe,” Oadrayyy, io ny sarivongan'i Mayawati voarakotra lamba.”
@tavleen_singh: Sarotra be ny hahatakatra hoe manampy amin'ny fomba ahoana mba hisian'ny fifdianana malalaka sy madio ny fandrakofana lamba ny sarivongan'i Mayawati sy ny elefantany ao Uttar Pradesh!
@ankit_me: Misaotra ny EC, nahazo fampihenana ny tetibola amin'ny dokam-barotra sy fampielezan-keviny i Mayawati.
@riya0001: Illvika Saikia: Izaho mihevitra hoe ny #EC dia miasa manampy an'i Mayawati amin'ny fandrakofana lamba ny Elefanta sy ny sarivongany, satria mitondra mankamin'ny fifantohan'ny saina sy ny fahalinan'ny mpifidy kokoa izany, mba hahafantatra azy.
@acorn: Nitin Pai: ny zava-dehibe mibaribary vitan'i Mayawati dia tsy tokony hafenina velively ny mpifidy. Marina mafy, ny fanapahan-kevitry ny EC handrakotra lamba ireo sarivongany dia tsy misy fototra & diso.
@sanjukaul: Sanjay Kaul: @pragmatic_d Lasa mariky ny fahefan'i Mayawati ireny sarivongana ireny. Ny fandrakofana azy dia mampahafantatra ny mpifidy mikasika ny fampiasàna tamin'ny tsy tokony ho izy ny volam-bahoaka. Aleo ny mpifidy no hitsara.
@rangats: Dia manontany tena aho hoe inona no mety ho nataon'ny EC raha toa i Mayawati nisafidy – Masoandro Miposaka – ho toy ny mari-pamantarany ? Hanome baiko ny olona tsy hivoaka ny trano amin'ny marain'andro ve?
@amit_lakhotia: Maniry handrakotra ireo sarivonganà elefanta ny EC ho an'ny fifidianana ao UP. Handeha handrakotra lamba ny tempoly ‘lotus’ koa ve zareo mandritra ny fifidianana ao Dehli ?
@pragmatic_d: Tsara, azonareo rakofam-boaly ny sarivongan'i Ms. Mayawati. Saingy manakory ny momba an'i Ms. Mayawati izy tenany. Hoterena hirako-boaly koa va re izy mandra-pahatongan'ny androm-pifidianana e ?
@rajeshkalra: Manontany tena raha toa ka manao fampielezan-kevitra ho an'ny Kaongresy ireo polisy mpandamina fifamoivoizana. Manainga ny tànany ry zareo ary mampiseho ahy ny fela-tanany mba hanajanonana ahy ! Tsy maintsy hitaraina amin'ny EC ihany
@sameermufti: mihevitra ny hifindra any Frantsa i Mayawati. Tsy misy iray akory ho afaka handrakotra ny sarivongany any !!!
Ny marina dia ilay bilaogera “Being Cynical” dia nanoratra taratasy misokatra iray ho an'ny Kaomisionam-pifidianana, nanipihany fa hoe tsy dia mitondra mankaiza ilay fanapahan-kevitra ary manontany ny amin'izay antony nanosika ny hetsika toy izany :
Satria efa mihamanakaiky ny fetr'andro farany amin'ity hariva ity, ny toro-làlan'ny Kaomisionam-pifidianana dia toa sahala amin'ny narahana ihany – nandaniana maherin'ny 1 crore (10 million) rupees teo ho eo araka ny vina.